July 2017 – enagrikkhabar
यी चार स्थानमा कोठी भएका हरु हुन्छन निकै भाग्यमानी र धनी पनि
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि चाबहिल चुच्चेपाटीमा एउटा गाउँ थपिएको छ जहाँ छन् विभिन्न जिल्लाका भूकम्प पीडितका छाप्रो। शुक्रबार तीजको दर खानेभन्दा अघिल्लो दिन। दिउसो भूकम्पपीडित छाप्रोहरु सुनसान थिए।
छाप्रोहरुको बीचमा एउटा खाली छाप्रो रहेछ। केही महिलाहरु भेला त्यही छाप्रोमा भेला भए। उनीहरु सेलरोटी खाँदै र नाचगान गर्दै थिए। दुई विदेशी नागरिकले भूकम्प पीडित महिलाहरुलाई दर खुवाउने कार्यक्रम राखेका रहेछन्।
त्यही भीडमा एक अधवैशे महिला थिइन्। न सेलरोटी खाएकी न नाचगानमै रमाएकी। हामी उनको नजिकै पुग्यौं, कुराकानी गर्न खोज्यौं। उनी राजी भइन्। नाम लक्ष्मी सुनुवार।
घर सिन्धुपाल्चोक। हामी उनको छाप्रोमा फर्कियौं। दुई जना बास बस्न मिल्ने उनको छाप्रोमा सामानहरु मिलाएर राखिएको थियो। सफा देखिन्थ्यो। ‘तीज कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ?’ सोध्यौँ।
गहभरी आँसु पार्दै उनले भनिन् ‘भो तीजको बारेमा कुरै नगरौं मन भत्भती पोलेर आउँछ।’ उनी तीजमा माइती नगएको नै १५ वर्ष पुगिसकेछ। १५ वर्षअघि भारतीय नागरिकसँग आफूखुसी विहे गरेपछि उनलाई माइतीको ढोका बन्द भयो। ‘बिहे गरेदेखि अहिलेसम्म तीजमा माइत गएको छैन।
अरु बेलामा मेरो कर्म यस्तै हो भनेर मन बुझाएपनि तीजको बेलामा मन भक्कानिन्छ’ उनले भनिन्। उनका पति विदेश गएको दुई वर्ष भयो। जम्मा एक पटक मात्र फोन सम्पर्क भएको छ।
‘अहिले त फोन गर्दा कम्पनीले अन्तै हिँडिसक्यो भनेको छ’, नेपालमै भेटेर बिहे गरेकी उनलाई पतिको घर कहाँ हो पनि थाहा छैन। लक्ष्मीले माइती नगएपनि माइतीमा मनाएको तीज भने बिर्सेकी छैनन्। तीज आएपछि अतीतका सम्झनाहरु पत्र पत्र गरी उनका अगाडि आउँछन्।
चाहेर पनि भुल्न सक्दिनन् उनी। ‘बाहिर निस्किएर दिदीबहिनीहरुसँग कुराकानी गरेर बिर्सने कोसिस गर्छु तर कताकता तीजको माहोलले त्यही दिन सम्झाइदिन्छ’ लक्ष्मी भन्छिन्। उनको माइती सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं नै आएको छ।
उनको छाप्रो चुच्चेपाटीबाट जम्मा १५ मिनेट टाढा आरुबारीमा। माइतीमा बाबुआमा र दाजुभाई छन्। बिहे गरेका दिदी र बहिनी पनि काठमाडौंमा नै छन्। उनीहरु लक्ष्मी भन्दा सम्पन्न छन्। दुबै जनाको आफ्नै घर छ।
दिदीबहिनीहरु उनलाई छाप्रोमा नै भेट्न आउँछन्। ‘हिजो मात्र यहाँ आएर भेटे। दाजुभाइले वास्ता गर्दैनन्’ लक्ष्मीले भनिन्। लक्ष्मीलाई बिहान आमाको फोन आएको थियो। तीज आयो के गर्दैछौ भनेर सोधिन्। आमा बिरामी छन्। लक्ष्मीलाई भेट्न जान खुब मन लागेको छ। बिहे गरेको ८ वर्षपछि उनलाई माइतीले बोलाएका थिए।
कहिलेकाहीँ जाने आउने पनि गरिन्। तर तीजमा भने अहिलेसम्म गएकी छैनन्। ‘दिदीबहिनी धेरै सम्पन्न छन्, म कमजोर भएँ आफैलाइ नमज्जा लागेर जान मन लागेन’ उनले भनिन्। अहिले त पति पनि छैनन्। ‘कहिलेकाहीँ जाँदा पनि आफैले गर्दा दुःख पाइस् भनेर बचन लगाउँछन् त्यसैले जान मन लाग्दैन’ लक्ष्मीले कुरा खोलिन्। पतिको नाममा अझै ब्रत बिहे गरेपछिका हरेक तीजमा लक्ष्मी पतिको लागि ब्रत बसिन्।
यसपाली पनि ब्रत बस्छु बुढाले छोडेर गएपनि मलाई याद आउँछ’ उनले भनिन् ‘मैले उसैको लागि भनेर माइतीलाई त्यागेँ उसैको माया लाग्छ उसैबाट मेरा छोरा छोरी जन्मिएका छन्। जो मेरो बाँच्ने आधार बनेका छन्।’ पतिले छाडेपछि लक्ष्मीलाई धेरैले भने- यस्तो मान्छेका लागि किन ब्रत बस्ने? तर मन मान्दैन। ‘मलाई छोडे पनि आफ्नो श्रीमान भनेको आफ्नै हो।
मलाई हेँला गरेर टाढा भएपनि धेरै याद आउँछ’ उनी भन्छिन्। लक्ष्मी गएको वर्ष त तीजको ब्रत बसेर पूजा गर्न पशुपति मन्दिर पनि गएकी थिइन्। यसवर्ष पनि जाने मन त थियो। तर घर कुर्नुपर्छ। ‘राति नै जान सक्दिन, विहान जाँदा धेरै लामो लाइन हुन्छ।
धेरै समय लाग्छ। धेरै समय छोडेर गयो भने चोर लाग्छ।’ त्यसैले लक्ष्मी नजिकैको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने योजनामा छन्। गाउँ हुँदाको तीज चुच्चेपाटीको छाप्रोभित्र लक्ष्मीलाई सिन्धुपाल्चोकको गाउँमा मनाएको तीजले खुब सताउँछ।
उनीहरु घरमै तीन दिदीबहिनी थिए। गाउँमा पनि धेरै साथीहरु थिए। दिदीबहिनीहरु जम्मा भएर खुबै नाच्ने गाउने गर्थे। ‘तर अहिले त यहाँ के गर्नु’ उनले भनिन् ‘ यहाँ पनि त्यही तीज आएको छ तर त्यस बेलाको समय जस्तो छैन।’ तीज नजिकिएपछि उनी विगतमा माइतीमा मनाएका तीज सम्झन्छिन्। दिदी बहिनीहरुसँग नाचेको र गाएको सम्झन्छिन्।
तर अहिले आफूलाई दिदी बहिनीसँग तुलना गर्दा खिन्न हुन्छिन्। ‘पहिलेको तीज सम्झेर मन पोल्न थाल्छ, रुन मन लाग्छ’ उनले भनिन् ‘हामी तीन दिदीबहिनी थियौं, उनीहरुको काठमाडौंमा आफ्नै घर छ, मेरो छैन।’
तीजको दरमा उनले खीर, दूध दही सहित मिठो खानेकुरा खाएको याद छ। लक्ष्मीले भनिन् ‘तर यसवर्ष विदेशीहरुले दिएको सेल रोटीलाई दर मान्नुपर्‍यो।’
मान्छेको शरिरमा हुने कोठिले पनि उसको भाग्य बताउने ज्योतिष विज्ञानले बताउने गरेको छ । तपाई सबैमा कहिँ न कहिँ कोठि हुन्छ तर ती सबै सुभ हुदैनन् ।
कतिपयले त आफुलाई सुन्दर देखाउन आफै कृतिम कोठि पनि बनाउछन् । त्यो भन्दा पनि शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा हुने कोठिहरुले कस्तो संकेत गर्छ त ? ज्योतिष विज्ञानको आधारमा निम्न स्थानमा कोठी हुनु भाग्यको प्रतिक मानिन्छ ।
आउँदो अगस्टमा ६ दिन पुरै अन्धकार हुने नासाको दाबी
उनले यो परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन विश्व समुदायलाई आग्रह समेत गरेका छन् । करिब २ सय १७ घन्टासम्म चल्ने यो आँधीबाट नआत्तिन र शान्त र संयम रहन पनि नासाले आग्रह गरेको छ ।
जहाँ निरोगीलाई नै उपचारको नाममा बलात्कार गरिन्छ
एजेन्सी । संसारका अहिलेका मानिस आफूलाई निकै मोर्डन भएको दावी गर्छन् । त्यसैले कतिपय मुलुक र स्थानमा गे र लेस्बियन हुनुलाई सामान्य रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, अझै कति यस्ता देश छन् जहाँ होमोसेक्सुअलिटीलाई अपराध मानिन्छ ।
तीन वर्ष पहिले उनले आफ्नो परिवारलाई यसबारेमा बताएका थिए । परिवारको प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्नलाई उनले ३ क्यामेरा सेट गरेका थिए ।
जब उनले आफ्नो परिवारको प्रतिक्रियालाई तस्वीरको माध्यमबाट संसारलाई देखाए तब कयौले उनीसँग आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव बताए । तब उनले Unveiled नामको तस्वीर श्रृङ्खला सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे ।
उनले आफ्ना दुई साथीमार्फत इक्वेडरका ती सेन्टरहरुबारे थाहा पाए जहाँ उपचारको नाममा होमोसेक्सुअलहरुलाई यातना दिइन्थ्यो । उक्त सेन्टरहरुमा गे र लेस्बियनलाई इमोशनल र शारीरिक यातना दिइथ्यो ।
उनीहरुलाई जबरजस्ती खाना खुवाइन्थ्यो । सबैभन्दा नराम्रो कुरा सेम सेक्सप्रति आकर्षण जगाउनका लागि उनीहरुमाथि सामूहिक बलात्कारसमेत गरिन्थ्यो । उक्त सेन्टरहरुमा उपचारको नाममा मानवताका सबै हद पार हुन्थ्यो ।
उनी यो कुरा आफ्नो आँखाले हेर्न चाहन्थिइन् । उनलाई आफू पनि लेस्बियन भएको थाहा पाए कैदमा पर्ने थाहा थियो । उनले आफ्नो ब्रामा गुप्त क्यामेरा लगाएर उक्त सेन्टरमा पुगिन् ।
त्यहाँ उपचारको नाममा नराम्रोसँग यातना दिइन्थ्यो । तब उनले उनीहरुको पीडा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिन् । यो तस्वीर त्यहाँ हुने अन्यायको एउटा अंश मात्र भएको उनले बताएकी छन् । एजेन्सी
बिदेशी भूमिमा भाग्य चम्किने सपना देख्ने ४० लाख मध्ये म पनि एक हुँ
हामी गुनासो वढी गर्छौं। आलोचना वढी गर्छौं। फलानोले यो गरेन। फलानोले त्यो गरेन्। हामी कहिलै यो भन्दैनौं, कि मैले के गरेंरु अथवा मैले के गर्नुपर्छ र मेरो दायित्व के हो? आफैलाई प्रश्न सोध्नु जटिल कुरा हो। यहि जटिल मोडमा हामी उभिएका छौं।
हामी आफुलाई कहिलै प्रश्न सोधिनौं। आफुलाई कहिलै जिम्मेवारी ठानेनौं? हामी केवल आलोचना मात्रै गरिरह्यौ। मानौँ, आलोचना गर्नु र बिरोध जनाउनु मात्रै कर्तब्य हो। देश अहिले नयाँ परिस्थितिमा प्रबेश गरिसकेको छ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले बिचारलाई परिस्कृत गर्न जरुरी छ, न कि पुरानै शैलीमा।
देश एकले बनाउछु भनेर बन्ने होइन। शरीर निर्माण हुनको लागि कोष, तन्तु र अङ्गहरुको आबस्यक्ता पर्दछ। कोष बलियो भयो भने तन्तु बलियो हुन्छ। तन्तु बलियो भयो भने अङ्ग बलियो हुन्छ। अङ्ग बलियो भयो भने शरीर बलियो हुन्छ।
शरिरमा सवै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व कोष हो। कोषले काम गर्न सकेन भने शरिरले कसरी काम गर्न सक्छ? समाज चलाउनको लागि पनि यहि प्रकृया लागू हुन्छ। हाम्रो देश पनि नेपाली जनको एउटा ठूलो समाज हो, जसको अबस्था जरजर छ।
किन जरजर छ रु यसको जवाफ खोजिनु जरुरी देखिन्छ। यसमा हामी कुनै न कुनै रुपमा दोषी छौँ। कुनै न कुनै रुपमा हामी आफ्नो दायित्व बिर्सिरहेका छौं। अब सवैले आफ्नो दायित्वको महशुस गर्ने ऐतिहासिक समय हाम्रो अगाडी आईसकेको छ।
बिदेशीएका युवाहरुको दायित्व
देशमा धेरै तन्त्रहरु आए र गए पनि। ब्यबस्था फेरियो तर जनताको अबस्थामा कुनै फेरवदल आएन। यो किन भयो? प्रश्न जन्मिन्छ। नयाँ परिस्थितिमा यसको समीक्षा हुनैपर्छ। यसको लागि प्रश्न उठाउनै पर्छ। प्रश्न नउठाउदासम्म जवाफ पाउन सकिँदैन। हामीले जवाफ खोज्नै पर्छ।
हामीले चाहेको त, देशको ब्यबस्थासंगै नागरिकको अबस्थामा पनि केही फेरिनु पर्छ भन्ने हो। तर केहि फेरिएन, केही भएन। कालान्तरमा यस्तो परिस्थिती आयो जहाँ मुलुक एउटा लेवर फ्याक्ट्रीमा रुपान्तरण भएको छ र लेवर निर्यात गरेर देशले रिमिट्यान्स आयात गरिरहेको छ। अनि त्यसैको सानो जगमा टेकेर देश चलिरहेको छ। अहिले दिनहुँ त्रिभुवन अन्तर्रास्ट्रिय बिमानस्थलमा तीन चारवटा लाशहरु ओरालीरहेको अबस्था छ अनि हुनु परिरहेको छ, नौ जवान वेचेर लास बुझिरहने देशको अभागी नागरिक।
मरुभूमिमा बिदेशीको भाग्य फुलाउने नौ जवान आज किन अभागी भयौं रु १८ बर्ष देखि ४५ बर्ष भित्रका चालीस लाख युवाहरु अहिले देश बाहिर छन त्यसैले आज ती युवाहरुको कर्तव्यको बिषयमा सोचिरहेको छु र ती चालीस लाख युवाहरुको पङ्क्तीमा छु म पनि। त्यसैले यो मेरो पनि कर्तब्य हो। अनि आफै भित्र केहि प्रश्न जन्मिएको छ र जवाफको खोजीमा छु।
हामीले भन्छौं, देशमा गरिखाने वातावरण नभएकाले बिदेशीएका हौँ। नेताले यो गरेन, त्यो गरेन। तर हामीले केहिलै यो सोच्न सकेनौं कि मैले देशको लागि के गरेको छु? अनि अब मैले के गर्नुपर्छ रु मानौँ देश वनाउने जिम्मा नेताको मात्रै हो। यसलाई पलायनवाद भनिन्छ।
देश वनाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। एउटा सुन्दर घर निर्माण गर्नको लागि बाबू आमाको जति भुमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कम भुमिका छोराछोरीको हुनु हुँदैन। यो हामीले कहिलै सोचेनौं। मानौँ, घर निर्माण गर्नको लागि दायित्व केवल वाबुहरुको हो, छोराछोरीको होइन। यसरी हामी भाग्दै आयौं। केवल आलोचना, हामीले जानेको यहि हो।
भनिन्छ, देशको अर्थतन्त्रको केही हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। तर पछिल्लो समयमा हुण्डी कारोवारले हाम्रो देशमा भित्रीने रेमिट्यान्समा धमिरा लागेको छ। हामीले आफ्नो दायित्व यहाँनेर भुलिरहेका छौँ। किनभने हामी केवल एक रुपैयाँको लोभमा हामी देश माथी आर्थिक नाकावन्दी लगाईरहेका छौँ।
हुण्डीवाट पैसा पठाउनु भनेको देशलाई आर्थिक नाकावन्दी लगाउनु जस्तै हो। वैधानिक होइन, अबैधानिक रुपमा नेपाल पैसा पठाईरहेका छौँ हुण्डी मार्फत। यहाँनेर हामीले आफ्नो नागरिक हुनुको दायित्व भुलिरहेका छौँ तर हामी नै हौं जो, नेताहरुलाई गाली गरेर नथाक्ने।
भन्छौँ कि, नेताले यो गरेन, त्यो गरेन। शुरुआत आफैवाट गर्नुपर्छ। अरुलाई प्रश्न सोध्नु भन्दा पहिले आफैलाई प्रश्न सोध्ने वेला आएको छ कि मेरो दायित्व के हो? नयाँ परिस्थितिको लागि नयाँ सोचको जरुरत छ।
हिजो जे थियो, वितेर गयो। अब बर्तमानमा जिउनु पर्छ नयाँ सोच लिएर, नयाँ विचार लिएर। तब नयाँ नेपाल सम्भव हुन्छ हाम्रै जिवनकालमा। त्यसैले देश निर्माणको अभियानमा बिदेशमा रहेका चालीस लाख युवाहरुको दायित्व कम हुनु हुँदैन। अबशर यहि हो, देशलाई केही दिने मौका। नागरिक हुनुको दायित्व यति पनि गर्न सक्दैनौं? यो मौका हामी कसैले नगुमाऔं। ईतिहास लेख्ने अभिभारा हाम्रो पनि हो। त्यो हिस्सा हामीले पाउनै पर्छ।
हामी युवाहरुको दायित्व
भनिन्छ, राजनिती फोहरी खेल हो। त्यसैले आफुलाई स्वच्छ छवि वताउने मान्छेहरु राजनितिवाट पलायन भएका देख्छौँ। यसरी हामी बर्षौ देखि भाग्दै आयौं। पलायन हुँदै आयौं। अब यो मुकाविलको लागि तयारी हुने समय हो। देशलाई काँध दिने समय हो।
घरको खम्वामा धमिरा लागेको छ, अब खम्वा फेर्न तयार हुनुपर्छ। घरलाई ध्वस्त हुनुवाट वचाउनुपर्छ। तर हामी भाग्छौँ। आजसम्म भाग्दै आयौं। यहि हामी युवाहरुको कम्जोरी हो। जुन दायित्व हामीले निभाउनु थियो, निभाउन सकेनौं।
केवल आलोचनामै समय बितायौं। अनि निरन्तर भागिरह्यौं। तर भागेर समस्या समाधान नहुँदो रहेछ, त्यो हामीले देख्यौं। अहिले समाज दुर्गन्धित छ, कारण राजनिती फोहर भएको छ। अब राजनिती सफा नगरी समाज स्वच्छ वन्दैन। यो हामीले बुझेनौं। अब बुझ्नुपर्छ र स्वच्छ मान्छेहरुले समाजको फोहर मिल्काउनु अत्यावश्यक छ। यो हाम्रो अहिलेको दायित्व हो। इतिहासले हाम्रो भुमिका मागेको छ। भुमिका निभाउन मौका चुकाउनु हुँदैन।
ठिक कुरा हो, राजनितिक दुर्गन्धित भएको छ। तर यहाँ पनि कारण खोजेनौं। कहिलै आफैसंग प्रश्न सोधिनौं र आफैसंग जवाफ खोजेनौं। हामीलाई लागिरह्यो, राजनिती यस्तो फोहरको दंगुर हो, जसलाई छोयो भने हाम्रो स्वच्छ शरीरमा दाग लाग्नेछ।
यहि डरले हामीलाई कातर वनाईरह्यो अनि भागिरह्यौं र फोहरको थुप्रो भित्रै हामी दुर्गन्धित भईरह्यौं। बरु हामी फोहरसंगै कुहिएर जान तयार भयौं तर फोहर उठाएर डस्टविनमा मिल्काउन डर मानिरह्यौं।
इतिहासमा यहि हाम्रो कमजोरी भयो। अब बिशेषतस् युवा जमातले हाम्रो ईतिहासलाई नयाँ ढंगले कोर्न ढिला गर्नु हुँदैन। इतिहासको निर्माता युवा हो, अथवा युवा नै परिवर्तनको बाहक हो। आज मुलुक यहाँसम्म आएको छ, मुख्य कारण युवा नै हो। एकपटक यस्तो अबस्था आउँछ जो, आफै अघि नसरी केही हुँदैन। आज त्यही अबस्था आएको छ युवाहरुको काँधमा।
राजनिती फोहरी खेल यस कारणले भईसकेको छ कि, किनभने त्यहाँ फोहरी मान्छेहरुको जमात छ। यदि त्यहाँ स्वच्छ मान्छेहरुको जमात हुने हो भने राजनितिको परिभाषा फेर्न सकिन्छ। आजसम्म के छ भने राजनिती गर्नु नै कमाउनु हो मानौं।
केही मान्छे कमाउनकै लागि जान्छन् पनि। मानौं राजनीति भनेको सेवा होइन, एउटा पेशा हो। हाम्रो अगाडी दुईवटा वाटाहरु छन्, एक कि राजनितिको परिभाषा बढल्नको लागि आफै अघि सर्नु पर्छ। दुई, कि परिस्थितिलाई चुपचाप सहेर बस्नु पर्छ। नत्र गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
राम्रोले नराम्रोलाई अनि अशलले खरावलाई बिस्थापित गर्नुपर्छ। आजसम्म नाराम्रोले राम्रो माथि राजा गरयो। अनि खरावले अशल माथि हैकम जमायो। अशल मान्छेहरु राजनीतिवाट पलायन हुँदै जाने हो भने जरुर त्यहाँ खराव मान्छेहरुको हालीमुहाली हुन्छ।
आजसम्म यहि भएको हो। अब पलायन होइन, हाम्रो अगाडी एउटा अबशर छ। त्यो हो देश बनाउने। अहिले हामीले यस्तो प्लेटफर्म पाएका छौँ जसको जगमा टेकेर नेपाललाई राम्रो नेपाल बनाउन सक्छौं। राम्रो नेपाल सम्भब छ। समृद्ध नेपाल सम्भब छ। बिकशित नेपाल सम्भब छ। त्यो पनि हाम्रै जिवनकालमा। त्यसैले एकपटक फोहरमा हामफाल्नु पर्छ, फोहरलाई सफा गर्नुपर्छ युवाहरुले। यहि फोहरले देश बिमारी भईसकेको छ। रोगलाई निर्मुल पार्नको लागि रोगको मुहानलाई खतम पार्नु पर्छ। यो जिम्मेवारी हामीले उठाउनै पर्छ। ईतिहासले यहि सिकाएको छ।
कतारको नयाँ श्रम ऐन अब नेपाली भाषामा पनि (खोजि खोजि पढौं काननी झमेला बाट बचौं र बचाउ)
काठमाडौं, चैत १९ – कतारको नयाँ 4ालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो ।
नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तकको शुक्रबार कता%4र मोहम्मद रमजान अलि मियाले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो ।
नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तकको शुक्रबार कतारमा भएको नेपाली मुस्लिम समाज कतारको अधिवेसनमा विमोचन गरिएको छ । पुस्तकको विमोचन कतारस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत मणि रत्न शर्मा , कतारको गृह मन्त्रालय अन्तरगतको सामुदायिक प्रहरी बिभागका उच्च अधिकारी अल वकिल अल दावित अब्दुल अजिज अल मुहन्नदी तथा कम्युनिटी बिभागका इन्चार्ज डा.मोहम्मद बहाउद्दिन, रास्ट्रिय मुस्लिम गठबन्धनका अध्यक्ष शमिम मिया अन्सारी र सांसद जाकिर हुसैनले बिमोचन गर्नुभयो ।
नेपालीमा अनुवाद गरिएको श्रम ऐनको पुस्तक कतारी राजदूतावास नेपालले प्रमाणित कपि छाप्ने भएको छ । पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गरेको भन्दै अनुवादक मियाले नेपालस्थित कतारी दूतावासलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
अनुवादक अलि मियाले यस अघि सन् २००४ मा पनि कतारको श्रम ऐन अनुवाद गरि पुस्तक प्रकाशन गर्नु भएको थियो । काम गर्ने देशको श्रम ऐन नेपाली भाषामा प्रकासन भएपछि नेपालीलाई सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । अनुवादक मिया मानव अधिकार समिति कतारको नेपाली प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
कतारमा पछिल्लो वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष गर्मी बढि हुने ! गर्मि यी १० कुरा अपनाउनुहोस
पछिल्लो वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष कतार लगायतका खाडी मुलुकहरुमा गर्मी धेरै हुने भएको छ । कतारको मौसम पूर्वानुमान शाखाको अनुसार यो वर्षको अप्रिल,मे र जुन महिनामा गर्मी धेरै हुने संम्भावना ६० देखि ७० प्रतिशतले रहेको छ । पुर्व हुँदै दक्षिण पुर्वी तर्फ वहने प्रचलित वायु को कारण देशभर तापक्रम बढ्ने देखिएको हो ।
त्यस्तै शाखाले अप्रिल २१ देखि मे ४ सम्म को समयमा कतारमा वर्षाको संम्भावना रहेको जानकारी गराएको छ तर वर्षा भएतापनि तापक्रम नघट्ने शाखाले थपेको छ ।
अप्रिल महिनाभर दोहा को उच्च तापक्रम ३३ डिग्री सम्म रहने र बाँकी स्थानहरुको उच्च तापक्रम ३५ देखि ४५ डिग्री सेल्सियस सम्म रहनेछ । बढ्दै गरको गर्मी मौसम बाट बच्न प्रशस्त पानी पिउन र सिधा घाम बाट बच्न शाखाले अनुरोध समेत गरको छ ।
गर्मी मौसममा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरु
१.कामको समयमा बाहेक अरुबेला सके सम्म अनाबश्यक घुमफिर वा किनमेलको लागि बाहिर ननिस्कने,निस्कनै परे पनि क्याप,ह्याट,सन ग्लास र शरिरको सबै अंग छोपिने कपडा लगाउने।
२.६ देखी ८ घण्टा अनिवार्य रुपमा सुत्ने र अनिदोमा बाहिर ननिस्कने।
३.धुम्रपान, मध्यपान र लागु औषधको सेबन नगर्ने। इनर्जी ड्रिङ्गस र चिया कफी कम पिउने।
४.बाहिरबाट आउने बित्तिकै पसिना नसेलाउदै लगाएको कपडा परिवर्तन नगर्ने तथा बाहिरबाट आउना साथ ननुहाउने।
५.खाना खाने बित्तिकै वा नुहाउने बित्तिकै नसुत्ने।
६.कोठा तातो भयो भनेर सुत्नु अघी एसी धेरै चिसो नबनाउने, सके सम्म एसीलाई २२(२४ डिग्री सम्म मात्र राख्ने।
७.पानी धेरै पिउने।सके सम्म हरिया तरकारीहरु, फलफुल बिशेष गरी खरबुजा, तरबुजा खाने ,जुसहरु बढी पिउने।
८.रमादान बाहेकका समयमा बाहिर निस्कदा सधैं पानी साथमा राख्ने।
९.धेरै गर्मी भयो भनेर धेरै चिसो पेय पदार्थ नपिउने, किनकी गर्मीमा टनसिलले छिट्टै समाउन सक्छ।
१०. यदी तपाईंले १२ घण्टा भन्दाबढी लगातार काम गरिरहनु भएको छ भने पानीको मात्रा बढाउनुस र आफुलाई सके सम्म कम तनाबमा राख्नुस।
११.तपाईंलाई ब्लड प्रेशर, ब्लड सुगरको समस्या छ भने र औषधी सेबन गरिरहनु भएको छ भने समय समयमा परिक्षण गरिरहनुस।
अनिल मगर/क्युएन रेडियो
इरानले पठायो कतारलाई खाद्यान्न ! साउदीको दुस्मन संग कतारको दोस्ती
असार ९, २०७४- साउदी अरबको नेतृत्वमा खाडी मुलुकहरूले कतारसँग सम्बन्ध तोडेपछि इरानले दैनिक ११ हजार टन फलफूल र तरकारी कतार पठाएको जनाएको छ ।
कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेका साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइनलगायतका देशले भने यो सहयोगलाई अतिवादीप्रतिको सहयोगका रूपमा लिएको फार्स समाचार समितिले बिहीबार जनाएको छ ।
आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती देशहरूले गत जुन ५ देखि कतारसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । कतारले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
इरान साउदी अरबको कडा आलोचक हो । इरानको बौसेहर प्रान्तका निर्देशक मोहम्मद मेहदी बोन्चारीले तेहरानले कतारका लागि दैनिक ११ हजार खाद्य पदार्थ निर्यात गरेको बताएका छन् ।
इरानको राष्ट्रिय वायु सेवाले जुन ११ का दिन कतारलाई ५ जहाजमा तरकारी पठाएको थियो । त्यही दिन इरानले ६६ टन मासु र विभिन्न जनावर पनि कतार पठाएको फार्सले जनाएको छ । त्यसपछि पनि ९० टन मासु कतार पठाइएको छ
युएईबाट साइबर आक्रमण भयो : कतार
श्रावण ६, २०७४- कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी मिडियाको साइबर आक्रमण संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट भएको आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार साँझ दोहामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले साइबार आक्रमणसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्दै युएईलाई आरोप लगाएको हो ।
गत मे को अन्तिम साता कतारको सरकारी समाचार संस्था ‘कतार न्युज एजेन्सी’ आक्रमण गरी कतारी अमिरले हवाला दिँदै गलत समाचार प्रकाशन भएको थियो । जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साउदी आइपुगेका थिए ।
मन्त्रालयका सूचना सुरक्षा विभागका सहायक निर्देशक ओथमान सलिम अल–हम्मोउदले ह्याकरहरु सफ्टवेर खडा गरी आक्रमण गर्न सफल भएको बताए । ‘
अप्रिल २८ मा सफ्टवेरमार्फत कतार न्युज एजेन्सीको वेभसाइटमा नियन्त्रण कायम गर्न र सबै कर्मचारीहरुको इमेल आइडी पनि पत्ता लगाए,’ उनले भने, ‘मे २३ मा गलत समाचार प्रकाशन भयो ।’
वासिङटन पोस्टले पनि कतारको न्युज एजेन्सी युएईबाट भएको भन्दै हालै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
उनले मे २४ रातिदेखि मे २५ बिहान ३ घण्टासम्म ह्याकरहरुको नियन्त्रणमा वेभसाइट रहेको बताए । ‘ह्याकरहरु निकै व्यवसायिक देखिए । यसको लागि राज्यले नै खर्च उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने ।
युएईका परराष्ट्रमन्त्री अन्वार गरगासले युएईबाट कतारको समाचार एजेन्सीमाथि आक्रमण नभएको बताउँदै आएका छन् ।
कतारस्थित नासर अल अलि इन्टरप्राइजेज कम्पनीले नेपाली कामदारहरूलाई नगद सहित सम्मान
कतारस्थित नासर अल अलि इन्टरप्राइजेज कम्पनीले नेपाली कामदारहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ।
कम्पनीका प्रमुख नासर अलि अल अलीले कामदारहरू दिताल प्रसाद चौधरी,धिरेन्द्र प्रसाद थारू,रहमुल मन्सुरी मियालाई दश वर्षे सेवा बापत १५ हजार कतारी रियाल, उत्कृष्ट काम बापत शम्सुल इलम लाई ३० हजार रियाल, कमल बहादुर थापा लगायतलाई कदर पत्र सहित सम्मान गरेका छन्।
करिब ९० प्रतिशत ‌‍बन्दा बढी नेपाली कामदार भएको यस कम्पनीले कामदारलाई विगत देखी नै आवश्यक सहयोग समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ। कम्पनी प्रमुख अलीले यसअघि भुकम्पमा क्षति पुगेका नेपाली कामदारहरूको घर निर्माण,विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग, पिछडिएका र असहाय बालबालिकाको शिक्षामा योगदान गर्दै आईरहेका छन् ।
यसैगरी ७ वर्षदेखि फैजुल ईस्लाम बेनिघाट सिऊरीनीटार, गोरखा लाई र हालै मात्र सिरहाको मदरसालाई ३० हजार रियाल पनि आर्थिक सहयोग नासर अल अलि इन्टरप्राइजेले गरेको छ ।
१५ बर्ष अगाडि करामा मा (विद्युत तथा खानेपनी मन्त्रालय) ठुलै अहोदामा कार्यरत नासर अल अलि इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष अल अलीले धेरै नेपालीलाई कम्पनी खोल्न प्रायोजन समेत गर्दै आउनु भएको छ ।